Eyona mizekelo ilungileyo yokupakisha | Abadali be-Intanethi
Kukho iibrendi ezininzi ezongeza kwiimveliso zabo a ukupakishwa kokudala, okwenza ukuba bavelele kuzo zonke ezinye iimveliso kwiishelufa zeevenkile ezinkulu kunye neevenkile. Nokuba kungenxa nje yokutsala umdla, okanye ngokuyilayo ukunxibelelana nabasebenzisi, amathuba okwenza ukupakishwa kokuqala awapheli.
Akubalulekanga nje ukuba uyilo lwepakethe luhle, kodwa kufuneka ukumela uphawu, kwaye kananjalo ukuvelisa intengiso. Uninzi lwezinto ezithengiweyo esizenzayo ezivenkileni zigqitywe xa sele sithengile kwindawo, ngenxa yesi sizathu kubalulekile ukwazi ukuba ungayisebenzisa njani inzuzo yepakethe.
Eyona ndlela ilungileyo yokuphefumlelwa kukubona iimeko zokwenyani, siza kubona ukudityaniswa koyilo olungayi kuqatshelwa, ukongeza ekuthetheni yintoni ukupakishwa kobuchule kunye nendlela yokuyiphumeza.
1 Yintoni ukupakisha?
2 Indlela yokufumana ukupakishwa kokudala
3 Izitshixo zokupakisha ukusebenza
4 Imizekelo yokupakisha enobuchule
4.1 IMolocow – olu bisi luphuma kwenye iplanethi
4.2 Sony headphones
4.3 Top– iikhondom ezifana neepilisi zaseSu Park
4.4 I-Hair Day Paste
4.5 Iingxowa ezichasene nobusela zesidlo sasemini, ukungunda sisisombululo
4.6 I-Smirnoff, ukupakishwa ekufuneka kuxotyulwe
4.7 iihempe zeti
4.8 Trident, lukhathalele uncumo lwakho
4.9 Ukujika abe ngoonodoli beLego
4.10 I-Butterbetter, ezimbini kwenye
4.11 Sala kakuhle kwiminatha yeziqhamo
4.12 I-Nike Air
4.13 Isilayi esifanelekileyo seKleenex yasehlotyeni
4.14 Ubusi zasendle, ngqo kwiinyosi
4.15 umnquma omncinci
4.16 Iipilisi zamandla eRally
4.17 UClara noEma, amaqanda
Ukupakishwa, kuba sisikhongozeli seemveliso esinazo ezisijikelezileyo, into oyibonileyo imveliso. Akunjalo kuphela, ukupakishwa kuye kwaba yinto yobugcisa, apho ubugcisa bokuyila ezo zikhongozeli zikhusela kwaye zisonge iimveliso.
Enye yeenjongo eziphambili, ukongeza ekwenzeni uyilo lusebenze, kukuba ukupakishwa kubamba ingqalelo yabathengi, ekubeni enye yeenkalo eziphambili zibonakala, kwaye kunye nayo unokwazi ukuba imveliso iya kuphumelela okanye ngokuchaseneyo.
Namhlanje, xa siqulunqa isitya, kufuneka sithathele ingqalelo ubuchule esiza kuyenza, ii-inki eziza kusetyenziswa kunye nezinto esiza kusebenza ngazo. Kuya kuxhaphaka ngakumbi ukubona kwiishelufu iimveliso ezinesitya esinokuphinda sisebenziseke, kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukukhathalelwa kokusingqongileyo.
Ke ngoko, ukupakishwa akufuneki ukuba ibe sisigqubuthelo esilula esigquma imveliso, ukuze ibe yipakethe enobuchule kufuneka ikwazi gcina imveliso ngokufanelekileyo, oko kukuthi, ayinakuphulwa, igobe, ikhubazeke, njl. Kufuneka ikwazise ngokucacileyo nangokulula malunga neenzuzo zemveliso equlethwe kuyo. Ukupakishwa kokudala kufuneka kubeke uphawu kwaye uncede ukuhlula kwabanye, kumangalisa umthengi.
Indlela yokufumana ukupakishwa kokudala
Ukufumana ukupakishwa kokuyila okothusa abathengi akukho lula. Zininzi nangakumbi iimveliso ezintsha kwimarike ngoko ke a idabi rhoqo kubayili xa uyila iphakheji, kwaye uzama ukudibanisa nabaxhasi. Oku kungenxa yokuba bafumana amawaka emiyalezo yonke imihla, kwaye ukuzama ukukhuphisana nabo kungumsebenzi onzima.
Ukuphuhlisa ipakethe yokudala ehambelana neemfuno zophawu kunye nabaphulaphuli abajoliswe kuyo, kukho uluhlu lweengcebiso ezisisiseko zokuzaliseka kwayo.
Eyokuqala kubo yileyo ukubheja kwimvelaphi, kodwa uhlala ethathela ingqalelo uhlobo lwemveliso oyinikezelayo, kunye noluntu othetha ngalo. Ngokomzekelo, awukwazi ukubonelela ngesambatho se-textile kwi-package apho ungaboni okanye uthinte imveliso, yinto engayi kusebenza.
Okokuqala, kufuneka yazi indawo yophawu oza kusebenza ngalo, ukupakishwa kufuneka kuphucule uphawu kunye nesicwangciso sayo.
Kwaye ekugqibeleni, Ungaze ulibale uluntu oza kuthetha nalo, into abayifunayo, uza kuyithetha njani, kufuneka uphendule kwiimfuno zabo.
Izitshixo zokupakisha ukusebenza
Njengoko sele sitshilo ngaphambili, ukupakishwa okulungileyo kufuneka yazisa abathengi ngemveliso ekuyo kwaye ithobela yonke imimiselo. Idatha ebonisiweyo, ubunzima, ubungakanani, izitampu zempilo, imihla yokuphelelwa yisikhathi, njl., kufuneka ziboniswe ngokucacileyo kunye nobungakanani obukhulu ngokwaneleyo, kufuneka zifunyanwe kwaye zifundwe ngaphandle kwengxaki.
Itekhnoloji ekufuneka ngalo lo myili khusela kwaye ugcine imveliso ikwimeko entle. Kufuneka ibe yimveliso enokugcinwa kwaye isasazwe ngaphandle kwengxaki. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba isikhongozeli siyahambelana namanyathelo olondolozo lwemveliso.
Kufuneka iboniswe i imiyalelo yokusetyenziswa kunye neempawu zokuvula imveliso. Ngezi zibonakaliso, sinceda abathengi ukuba bayonwabele imveliso ngokuchanekileyo.
Abathengi abaninzi ngakumbi bafuna iimveliso abazidlayo ukuba babe nazo ukupakishwa kwakhona okuthathela ingqalelo okusingqongileyo. Ukuthobela le miba ayithethi nje kakuhle ngemveliso, kodwa ngophawu ngokubanzi.
Ukupakishwa yileta yentshayelelo yokuba iimveliso zinabo, ngoko uyilo lwayo kufuneka lucingwe kwaye luhlengahlengiswe ukuze luboniswe kwiishelufa zevenkile enkulu okanye ezivenkileni, ayinakuba sisitya esintsokothileyo sokutshintsha, esiqhekekileyo, okanye esenzayo. ayibonisi imveliso ekuyo. Kufuneka ivelele ngaphezu kwazo zonke iimveliso ezifanayo ezijikelezileyo.
Imizekelo yokupakisha enobuchule
IMolocow – olu bisi luphuma kwenye iplanethi
Top– iikhondom ezifana neepilisi zaseSu Park
I-Hair Day Paste
Iingxowa ezichasene nobusela zesidlo sasemini, ukungunda sisisombululo
I-Smirnoff, ukupakishwa ekufuneka kuxotyulwe
Trident, lukhathalele uncumo lwakho
Ukujika abe ngoonodoli beLego
I-Butterbetter, ezimbini kwenye
Sala kakuhle kwiminatha yeziqhamo
Isilayi esifanelekileyo seKleenex yasehlotyeni
Ubusi zasendle, ngqo kwiinyosi
Iipilisi zamandla eRally
UClara noEma, amaqanda
Siyathemba ukuba emva kokufunda le post kwaye ubone le mizekelo, uye wavula amehlo akho kunye nengqondo, kwaye uyeke ukucinga ukuba ukupakishwa yinto yokuhlobisa kuphela yeemveliso, kuba kuninzi kunoko, ekubeni ukuyila kwezi , ziyakwazi. Impembelelo ngokuthe ngqo kubathengi kwisigqibo sokuthenga kwaye kwimbono onayo malunga ne-brand.
Ukupakishwa okulungileyo yenye yezinto ezenza ukuba umfanekiso webrand uhlale kwimveliso. Ngeempawu ezibalulekileyo ezifana enokusetyenziswa kwakhona, esebenzayo kwaye enomtsalane, yenza isikhongozeli sibe yinto exabisekileyo. Kukho ihlabathi lamathuba, apho sinokukhulula ubuchule bethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imizekelo emihle yokupakisha yokudala